भोकै बसेर चाँडो तौल घटाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ? भूलेर पनि नगर्नुहोस् यस्तो गल्ती https://onlinenepalaja.com/archives/39074 – Khabaarpati
भोकै बसेर चाँडो तौल घटाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ? भूलेर पनि नगर्नुहोस् यस्तो गल्ती https://onlinenepalaja.com/archives/39074
December 7, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on भोकै बसेर चाँडो तौल घटाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ? भूलेर पनि नगर्नुहोस् यस्तो गल्ती https://onlinenepalaja.com/archives/39074
शरीरको उचाइको अनुपातमा हुनुपर्ने औसत तौलभन्दा शारीरिक तौल बढी हुनुलाई मोटोपन भनिन्छ । मोटोपनबाट रोगहरु उत्पन्न हुन्छन्।मोटोपन घटाउन सकेको खण्डमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, उच्च रक्तकोलेस्टेरोल, हृदयघातजस्ता रोगहरुलाई कम गर्न सकिन्छ। मोटा व्यक्तिहरुले जीवनशैली परिवर्तन गर्दा शारीरिक तौल घटाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ।
१) भोकै बसेर चाँडो तौल घटाउने प्रयास गर्नु हुँदैन। यसबाट विभिन्न विकृतिहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। हप्ताको १ किलो ग्रामभन्दा बढी तौल घटाउनु उपयुक्त हुँदैन।२) उसिनेको खाना मात्र खानुपर्छ भन्ने गलत धारणा राख्नु हुँदैन। स्वादका लागि केही मरमसलाहरू प्रयोग गरी खाद्यपदार्थलाई स्वादिष्ट बनाउन सकिन्छ। नुनको मात्रा भने कमै प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ।
३) बिहान-बेलुकीको मुख्य खानाको सुरूआत सूपबाट गर्नु उत्तम हुन्छ। सूप खाएपछि पेट चाँडै भरिन्छ। अरू खाद्यपदार्थ कम खाइन्छ । सूपमा चिल्लो भने हाल्नु हुँदैन। कुनै पनि खाद्यपदार्थलाई राम्रोसँग चपाएर झोल बनेपछि मात्र निल्नु बेस हुन्छ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
४) दैनिक ३-४ पल्टभन्दा बढी खाना खानु हुँदैन। सधैँ नियमित रूपले निश्चित मात्रामा खाद्यपदार्थको प्रयोग गर्नुपर्छ। एकै पल्ट धेरै खाना खानु उचित हुँदैन।५) भोकको अनुभूति भैरहेमा अति कम क्यालोरी दिने खाद्यपदार्थहरू जस्तै: गाजर, काँक्रो, कागतीको सर्बत आदि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
६) बेलुकाको खाना (डिनर) अलि सबेरै, बेलुका ७ बजेभित्र खानु उपयुक्तहुन्छ। खाना खानेबित्तिकै सुत्नु हानिकारक हुन्छ।७) तौल घटाउनका लागि उचित व्यायाम पनि खानाजत्तिकै महत्वपूर्ण छ। त्यसकारण बिहान सबेरै हिँड्ने अथवा हलुका व्यायाम गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।व्यायाम सकेपछि नियमित स्नान गर्नुपर्छ। यसले शरीरलाई स्वच्छ र फूर्तिलो बनाउँछ। योगासन र प्राणायामबाट पनि तौल घटाउन सकिन्छ।
८) डाइटिङ सुरू गरेको १-२ हप्तासम्म छटपटी लाग्ने, मीठो, अत्यधिक क्यालोरी दिने खाद्यपदार्थ खान मन लाग्ने, निद्रा नपर्ने, पेट पोल्ने, अमिल्चुकी आउने आदि लक्षणहरू देखा पर्न सक्छन्। यी लक्षणहरूलाई आत्मबलले दबाउनुपर्छ।
तौल घटाउने दृढ संकल्प लिएमा यस्ता सानातिना समस्याहरूलाई सजिलै निराकरण गर्न सकिन्छ। पेटभित्रको अम्ललाई प्रशस्त पानी पिएर जित्न सकिन्छ । आवश्यक परे एसिडिटी घटाउने औषधि सेवन गरे हुन्छ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
चार वटै हात खुट्टा नभएका बालक सिँढी चढ्न र ओर्लिन सक्छन्, पाईलट बन्ने छ सपना (हेर्नु’होस भीडीयो)
भारतिय चर्चित टिभि सिरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ की अभिनेत्री दिव्या भटनागरको कोरोनाका कारण निधन
गुर्जोको सेवन गर्नु भएको छ?बाहिरियो यस्तो डरलाग्दो तथ्य जुन धेरैलाई थाहा छैन,एकचोटी अवश्य पढ्नुहोस,नत्र ढिला होला
January 22, 2021 January 22, 2021 Khabar Pati
आज पनि बढ्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् कति पुग्यो तोलाको ? May 11, 2021
भगवान शिवका प्रिय हुन्छन यी बार जन्मिने व्यक्ती May 11, 2021
महाअल्छी हुन्छन यी राशि May 11, 2021
डाक्टरको लापरबाहीले अभिनेता राहुल बोहराको गयो ज्यान, मृत्युअघि अक्सिजनको साटो मास्क मात्रै लगाइदिएको यस्तो भिडियो बाहिरियो May 11, 2021
विहे गरेको २ वर्ष हुनै लाग्दासम्म वच्चा नजन्माएकी आँचललाई आइपर्यो यस्तो समस्या ! May 11, 2021